प्रविधि Archives - Page 48 of 56 - Purbeli News
आयो एक सेकेण्डमै मोबार्इल चार्ज हुने प्रविधि
बुधबार, मंसिर २९, २०७३
काठमाडौं । एक सेकेण्डमै आफ्नो मोबाईल फूल चार्ज गर्न चाहनुहुन्छ ? सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, यस्तो प्रविधिको विकास भएको छ कि अब त्यो प्रविधिको प्रयोग गरेपछि तपाईको मोबाईल लामो समयसम्म चार्ज टिक्नेमात्रै होईन कि एक सेकेण्डमै मोबाईल फूल चार्ज पनि हुने बताईएको छ । युनिभर्सिटी अफ सेन्टर फ्लोरिडाका बैज्ञानिकहरुले आविस्कार गरेको सुपर क्यापासिटर ब्याट...
हङ्कङ खोटाङ् समाजको पैदल यात्रा
सोमबार, मंसिर २७, २०७३
हङ्कङ । समयसँगै फेरिएको आधुनिकता र बैज्ञानिक प्रविधिले मानिसलाई सहज बनाएको छ, तर प्रविधिमा पूर्णरुपमा निर्भर भएकै कारणले ब्यक्तिगत स्वास्थ्यका विभिन्न समस्याहरु भोगिरहनु परेको यर्थाथता छ । ब्यस्तताको शहर हङ्कङमा बाध्यता र विवशताले रातदिन परिश्रम सँगै प्रदुषणमा दिनहरु ब्यक्तित गरिरहेको बेला हङ्कङमा स्थापित खोटाङ् समाजले पदयात्रा (हाईकिङ) को कार्...
बेलबारीमा पत्रकारिता तथा उदघोषण तालिम
शुक्रबार, मंसिर २४, २०७३
बेलबारी । सञ्चार माध्यायमहरुका लागी दक्ष जनशत्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ मोरङको बेलबारीमा शुक्रबार देखि एकहप्ते आधारभुत रेडियो पत्रकारिता तथा उदघोषण तालिम शुरु भएको छ । सञ्चार क्षेत्रमा रुचि भएका र केही गर्न चहानेहरुका लागी रेडियो बेतना ९७.१ मेगाहर्जको आयोजनामा सो तालिम शुरु भएको हो । तालिमको शुक्रबार एक कार्यक्रमका बिच रेडियो बेतनाका अध्यक्ष ...
फेसबुकमा बिर्सेर पनि सेयर गर्न नहुने यी फोटोहरू – जसले अप्ठ्यारोमा पार्नसक्छ
सोमबार, मंसिर १३, २०७३
काठमाडौं / कतै फोटो खिच्दा फेसबुकमा हालेर ट्याग गर्नुस् भन्ने त सबैको बानी नै भइसक्यो । आफ्नो कुरा अन्य व्यक्तिसम्म पु–याउन हामी सामाजिक सञ्जालमा फोटोहरु अपलोड गर्छौं । फेसबुकमा राखिएको फोटोका कारण कयौं नराम्रा घटनाहरु घटेका छन् । जुन कुराको हामीले हेक्कासम्म पनि राख्न सकेका छैनौं । ख्याल ख्यालमा राखिएको तस्वीरले आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने समेतको खतर...
क्यान महासंघ सुनसरीको १० औं साधारणसभा सम्पन्न
शनिबार, मंसिर ११, २०७३
सुनसरी, मंसिर ११ / कम्प्युटर एशोसियसन अफ नेपाल (क्यान)महासंघ सुनसरीको १० औं साधारण सभा इटहरीमा स्थित अाेम पाथिभरा हाेटलमा सम्पन्न भएको छ । क्यान महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष भिमप्रसाद गिरीकाे अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा क्यान महासंघका केन्द्रीय सदस्य ठाकुरकुमार श्रेष्ठ, क्यान महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामकुमार रार्इ लगायतहरूले उपस्थिती...
एनसेलले ल्यायो ‘एकमा दुई अफर’, अब भ्वाईस सेवा मात्र २५ पैसा प्रति मिनेट
आइतबार, मंसिर ०५, २०७३
काठमाडौं, मंसिर ५ / एनसेलले आफ्ना ग्राहकका लागि भ्वाईस प्याकमा ‘एकमा दुई अफर’ अफर सार्वजनिक गरेको छ । अव एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले अब कर सहित २५ पैसा प्रति मिनेट सम्ममा एनसेलको अन्य नम्बरमा कल गर्न सक्नेछन् । यो योजना सोमबार (मंसिर ६, २०७३) बाट लागु हुनेछ । यस योजना अन्र्तगत हालकै मुल्यमा दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक भ्वाईस प्याक खरिद गर्दा दोब्बर मिन...
तपाइ माेवाइल किन्दै हुनुहुन्छ ? त्यसाेभए याे कुरामा ध्यान दिनुस ! नत्र पछुताउनुपर्ला
काठमाडौँ । माेवाइल भन्ने बित्तीकै एक छिन त जाे काेही पनि फुरू३गै हुने गर्दछन । त्यसमा पनि अहिलेकाे जमानामा माेवाइल नबाेक्ने सायदै बिरलै हाेलान । हामि माेवाइल बजारबाट त किन्छाै तर सामान्य भन्दा सामान्य कुरामा ध्यान दिन चाहदैनाै अनी पछि गएर अाफै पछुताउछाै । हुन त बजारमा सस्ता र कम फङ्सनका मोबाइल पनि पाइन्छ । तर, तपाईंलाई स्मार्टफोनको आवश्यकता परे...
शुक्रबार रातिदेखि शनिबारसम्म नेपाल टेलिकमकाे मोबाइल सेवा अबरूद्द हुने
बिहिबार, मंसिर ०२, २०७३
२ मंसिर, काठमाडौं । शुक्रबार रातिदेखि शनिबारसम्म नेपाल टेलिकमका मोबाइल तथा सिडिएमए सेवा अबरूद्द हुने भएकाे छ । जीएसएम पोस्टपेड सेवालाई कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ सिस्टममा स्थानतरण गर्न लागिएकाे टेलिकमले जनाएको छ ।
फेसबुकमा नगर्नुहोस् यी गल्ती, अकाउन्ट नै बन्द हुनसक्छ
फेसबुकमा स्टाटस लेख्नु, फोटो पोस्ट गर्नु तथा अरुका पोस्टमा लाइक र कमेन्ट गर्नु हामीमध्ये धेरैको दैनिक रुटिन नै हो । फेसबुक चलाउने क्रममा यसका नीति-नियमहरुबारे जानकारी राख्नु आवश्यक हुन्छ । किनकी आफ्ना नीति-नियमहरुको उल्लघंन गरेको खण्डमा फेसबुकले सम्वन्धित व्यक्तिको एकाउन्ट बन्द गरिदिन सक्छ । कस्तो अवस्थामा फेसबुक एकाउन्ट ब्लक हुन सक्छ भन्ने जानकारी...
एनसेलले पायाे ‘टेलिकम कम्पनी अफ द इयर २०१६ अवार्ड’
काठमाडौं । नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले यस वर्षको उत्कृष्ट दुरसंचार कम्पनी ‘टेलिकम कम्पनी अफ द इयर २०१६’ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । उक्त अवार्ड एनसेललाई अन्र्तराष्ट्रिय विकास साझेदारी कम्पनी फ्रोस्ट एण्ड सलिभनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘२०१६ नेपाल बेस्ट प्राक्टिसेस् अवार्डस्’ को एक भव्य समारोहमा बुधबार प्रद...